Vaovao - Ny varotra fiara any Shina dia manjelanjelatra rehefa mihodina amin'ny virus ny sisa amin'ny tontolo
Mpanjifa iray no niresaka tamin'ny mpiasan'ny varotra tao amin'ny fivarotana Ford tany Shanghai ny 19 Jolay 2018. Toerana tokana mamirapiratra ny tsenan'ny fiara ao amin'ny toekarena lehibe indrindra any Azia satria manaparitaka ny varotra any Eropa sy Etazonia Qilai Shen / Bloomberg ny tsimokaretina.
Ny fangatahana fiara any Shina dia mandeha hatrany amin'ny tanjaky ny hery, manao ny tsena fiara amin'ny toekarena lehibe indrindra any Azia ho toerana tokana mamirapiratra satria ny areti-mifindra coronavirus dia mampihena ny varotra any Eropa sy Etazonia.
Ny fivarotana sedan, SUV, minivan ary fiara maro samy hafa dia nitsambikina 7,4 isan-jato tamin'ny volana septambra tamin'ny taona teo aloha ka hatramin'ny 1,94 tapitrisa unit, hoy ny Fikambanan'ny Fiaran'ny Mpitondra entana China, ny talata lasa teo. Izany ny fiakarana fahatelo isam-bolana mahitsy, ary ny fangatahana SUV no tena nahatonga izany.
Ny fandefasana fiara fitateram-bahoaka ho an'ny mpivarotra dia nitombo 8 isan-jato hatramin'ny 2,1 tapitrisa unit, raha ny varotra fiara fitaterana, anisan'izany ny kamio sy bus, dia nitombo 13 isan-jato hatramin'ny 2.57 tapitrisa, hoy ny angon-drakitra navoakan'ny Fikambanan'ny mpamokatra fiara-motera China.
Miaraka amin'ny varotra fiara any Etazonia sy Eropa mbola voan'ny COVID-19, ny famerenana amin'ny laoniny ny fangatahana any Shina dia tombony ho an'ireo mpanamboatra iraisam-pirenena sy anatiny. Izy io dia ho firenena voalohany manerantany miverina amin'ny haavon'ny volan'ny 2019, na dia amin'ny 2022 aza, hoy ny mpikaroka, anisan'izany ny S&P Global Ratings.
Nanamboatra vola amina miliara dolara tany Sina ny mpamokatra fiara manerantany, ny tsenan'ny fiara ambony indrindra eran'izao tontolo izao nanomboka ny taona 2009, izay manitatra ny saranga antonony nefa mbola ambany ihany ny fidirana. Ny marika avy any amin'ny firenena toa an'i Alemana sy Japon dia nahatsapa ny areti-mandringana noho ny mpifaninana aminy - ny fihenan'ny tsena natambatra ny marika sinoa dia nidina hatramin'ny 36,2 isan-jato tao anatin'ny valo volana voalohany raha tampon'ny 43,9 isan-jato tamin'ny 2017.
Na dia efa tafarina aza ny tsena fiara Shinoa, dia mety mbola hanoratra ny fihenan'ny varotra fahatelo fahatelo isan-taona, hoy i Xin Guobin, izay minisitra lefitra ao amin'ny Minisiteran'ny Indostria sy ny haitao fampahalalam-baovao, tamin'ny volana lasa teo. Izany dia noho ny fihenan'ny fihenan-tsasatra mafy tamin'ny fiandohan'ny taona, nandritra ny haavon'ny valanaretina.
Na eo aza izany, ny lanjan'i Sina dia ampitomboina amin'ny alàlan'ny fifantohany amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana fiara-mandeha amin'ny herinaratra, fiovan'ny teknolojia izay nandaniam-bolan'ny fotoana sy vola be. Tian'i Beijing ny fiara vaovao misy angovo vaovao 15 isan-jato na mihoatra ny tsena amin'ny 2025, ary farafaharatsiny antsasaky ny varotra rehetra folo taona aty aoriana.
Ny wholesales an'ny NEV, misy fiara elektrônika madio, hybrida plug-in ary autos-cell fuel-cell, dia nitombo 68 isan-jato hatramin'ny 138000 unit, firaketana iray ho an'ny volana septambra, hoy ny CAAM.
Ny Tesla Inc., izay nanomboka ny fandefasana azy avy tany Shanghai gigafactory tamin'ny fiandohan'ny taona, dia nivarotra fiara 11 329, nihena 11.800 tamin'ny volana Aogositra, hoy ny PCA. Ny mpamokatra fiara amerikana dia laharana fahatelo amin'ny sokajy NEV tamin'ny volana lasa teo, tao aorian'ny SAIC-GM Wuling Automobile Co. sy BYD Co., hoy ihany ny PCA.
Nilaza ny PCA fa antenaina ny NEV hanampy amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny varotra fiara amin'ny telovolana fahefatra miaraka amina modely vaovao mifaninana, ary ny tanjaka any Yuan kosa dia hampihena ny vidiny eo an-toerana.
Ny varotra fiara amin'ny ankapobeny mandritra ny taona iray dia tokony ho tsara kokoa noho ny vinavina teo aloha ho an'ny fihenan'ny 10 isan-jato noho ny fanarenana ny tinady, hoy i Xu Haidong, lefitra injeniera lefitra ao amin'ny CAAM, fa tsy namelabelatra.
Shock Absorber Bolt, Hub misy kodiarana, Tyre Ball Joint, Shock Absorber fingotra, Hood Shock Absorber, Knuckle familiana eo aloha,